घडेरी किन्ने सोंचमा हुनुहुन्छ ? अब दलालबाट हैन सरकार संगै किन्नुस – Todays Nepal
घडेरी किन्ने सोंचमा हुनुहुन्छ ? अब दलालबाट हैन सरकार संगै किन्नुस
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले घरजग्गा कारोबारलाई अब मान्यता प्राप्त संस्थाबाट मात्रै कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था गरेपछि सरकारी संस्थाबाट कारोबार सुरु भएको हाे । घरजग्गा कारोबार राष्ट्रिय आवास कम्पनी, मनोहरा जग्गा एकिकरण आयोजना, चमती जग्गा एकिकरण आयोजनाले सुरु गरेको हो ।
पोशाकमै रहेका ट्राफिकदाइ पन्चे बाजामा सडकमै यसरी नाचेपछी !
कस्को प्रेममा यति लठ्ठ छिन चर्चित गायिका इन्दिरा जोशी !